July 2011 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on July 19, 2011 by kyawkyawoo
ကျွန်တော့ weblog မှာမကြာ ခဏလာရောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ အလ္လာအရှင်မြတ် ရဲ့ သဘောသဘာဝ ကို မေးမြန်းတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် ဆရာအလ်ဟာ့ဂျ ဦးအေးလွင် ရဲ့ ဟောပြော ပို့ချချက်ကို ဆရာဦးစိုးလွင်ရဲ့ကုရအန့်သုတ စာမျက်နှာမှ… Read more မမြင်ရသောအရှင်အားကိုးကွယ်ခြင်း
Posted on July 16, 2011 July 16, 2011 by kyawkyawoo
Mid-Sha’ban is the 14th day of the eighth month (Sha’ban) of the Islamic lunar calendar. The preceding night is known… Read more Mid-Sha’ban, ShabeBira’at , or ‘Night of Emancipation’.
Posted on July 15, 2011 July 15, 2011 by kyawkyawoo
Alhamdu-Lilah, ( Thanks to Allah SWT) It has been three years since I have started writing posts in Kyaw Kyaw… Read more My Blog helps me.. Thanks to Allah SWT
Posted on July 8, 2011 July 11, 2011 by kyawkyawoo
ဒီဗီဒီယိုလေးဟာကလေးငယ်များအပါအဝင် အာဖဂန် နိုင်ငံရဲ့ အစွန်အဖျား တောင်တန်းတွေကြားမှာနေထိုင်တဲ့ အပစ်မဲ့သူအများစုရင်ဆိုင် နေရတဲ့ ဘဝကို ရှင်းလင်းမြင်သာအောင်ရိုက်ပြထားပါတယ်။ အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက် သမားများကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းနေပါတယ်ဆို တဲ့ အမေရိကန် ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လူသတ်စက်ရုပ် ဒရုန်း သို့မဟုတ် ကောင်းကင် မှ သေမင်းတမန် နဲ့ရင်ဆိုင်… Read more ကောင်းကင် မှ သေမင်းတမန်
Dua’ (Supplications) for protection from the evil Jinn
Posted on July 8, 2011 July 8, 2011 by kyawkyawoo
Al-Hamdulillah, wa Sallallahu ^ala Rasulillah. Allah is the Protector, and upon Him we rely. Know that it was confirmed in… Read more Dua’ (Supplications) for protection from the evil Jinn